Miala tsiny amin’ny Tale jeneralin’ny hetra aho fa efa misy izany ny fanampiana efa homena hahafahanareo miatrika ny olona. Maninona ny vahoaka Malagasy kely sy ny Malagasy mpamokatra kely sahirana no terena sahady handoa hetra satria ny hetra tambatra na “impôt synthétique” sy ny hetra tamberina amin’ny vola miditra na “impôt sur le revenu » ao anatin’izany, hoy izy. Fa hamono ny orinasa Malagasy ve ny tanjon’ny fanjakana ? Ny an’ny olona rehetra manerana an’izao tontolo izao dia miantona daholo ny resaka hetra aloha amin’izao fotoana izao. Tsy fahaizana mitantana izany, ary famonoana ny orinasa Malagasy. Matoa misy 165,9 tapitrisa dolara nampindramin’ny FMI antsika ho an’ny « balance de paiement » dia ao anatin’izany ary efa hitan’izy ireo io resaka hetra io anisan’ny olona, ka noho izany tsy maintsy ao anatin’ny fanampiana. Izany tsy hazavaina amin’ny vahoaka, fa hatao tao ny zazakely ny Malagasy amin’ity krizy ity, hoy i Serge Zafimahova. Efa naneho ihany koa moa ny tenany fa tsy misy fangaraharahana ny fitantanana ny tohana ara-bola iraisam-pirenena izay misy ny fanomezana ary misy ny trosa, ka raha ny an’ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena izay raha hatambatra dia manome 301 tapitrisa dolara eo.